Ingozi yebhayisikili noma yesithuthuthu | Izinkampani Zomthetho eDubai
Njalo ngonyaka, abantu abaningi baba yizisulu zezingozi zomgwaqo ngenxa yokuziphatha budedengu nokushayela budlabha. Amacala ezingozi zebhayisekili nezithuthuthu eDubai lenyuke ngokuhamba kweminyaka, alimaza abantu abaningi aze abulala abambalwa.
ubandakanyeke engozini yebhayisekili noma yesithuthuthu
funa isinxephezelo kulowo okonile
Uma uke wabandakanyeka engozini yebhayisekili noma yesithuthuthu eyadalwa ngenxa yokungabi necala lakho, unelungelo lokufuna isinxephezelo kulowo okonile. Indlela engcono yokwenza lokho ukuqasha ummeli wezingozi zamabhayisekili noma ummeli wengozi yezithuthuthu eDubai.
Izimbangela Ezijwayelekile Zengozi Yezithuthuthu noma Ingozi Yezithuthuthu
E-Dubai, izimbangela ezivamile zezingozi zamabhayisekili noma zezithuthuthu zingabangelwa ngenxa yezinto eziningi. Ezinye zazo zifaka:
Ukushaya noma ukuthumela imiyalezo ngenkathi ushayela
Ayilandeli imithetho yomgwaqo
Ukusebenza kahle kwensiza
Ukushintsha komgwaqo okungekho emthethweni
Izimo zomgwaqo eziyingozi
Isimo sokunganaki ngenkathi ushayela
Yini Ongayenza Ngemuva Kokuphahlazeka Noma Ingozi?
Lokho okwenzayo ngemuva kokuzibandakanya engozini yebhayisekili noma yesithuthuthu kungathinta ukuphepha kwakho, kuvule indlela yokufuna isinxephezelo esiphumelelayo, bese kuvikela elinye iqembu ukuthi lingasoli icala kuwe. Izinto ezimbalwa ezibalulekile okufanele zenziwe ngemuva kwengozi yengozi zibhalwe ngezansi:
Iya endaweni ephephile ukugwema ezinye izingozi futhi unake ukulimala kwakho uma kunzima. Funa ukwelashwa uma kunesidingo.
Xhumana namaphoyisa nezinye iziphathimandla.
Hlanganisa ofakazi kanye nobufakazi ngokuthatha izithombe. Musa ukubalekela indawo.
Yazisa inkampani yakho yomshuwalense futhi ubatshele yonke imininingwane.
Funa ukumelwa okusemthethweni ngokushayela lommeli wokulimala komuntu noma ummeli.
Izinhlobo Zokulimala Kweengozi
Izingozi ezincane zingaholela ekulimaleni okuncane njengokusikeka noma ukuhlukunyezwa kwemisipha. Kodwa-ke, izingozi ezinkulu zingadala ukulimala okukhulu ngisho nokufa. Izinhlobo ezivame kakhulu zokulimala kwengozi ezingadalwa ngenxa yeengozi zamabhayisekili noma ezithuthuthu zibhalwe ngezansi:
Amathambo aphukile nokuhlakazeka
Ukulimala kwekhanda nentamo
Ukukhubazeka okungapheli noma ukukhubazeka
Intambo yomgogodla kanye nokulimazeka emuva
Ukulimala okukhulu esiswini noma esiqwini
Uma kuqhathaniswa nezingozi zemoto, ingozi yezithuthuthu noma yebhayisekili kungakubiza kuze kube izikhathi eziyi-12 ngaphezulu. Njengesisulu sengozi, ungafuna isinxephezelo ngezindleko zethu zokwelashwa zamanje nezesikhathi esizayo, ukuhlukumezeka ngokomzwelo ngenxa yobuhlungu nokuhlupheka, ukulahleka komholo noma imali etholwayo, kanye nomonakalo wokujeziswa noma ukulahleka kwempahla.
Kodwa-ke, ukufaka isicelo ngokunxeshezelwa ngempumelelo, kufanele uqinisekise amajaji ukuthi akuyena owenze iphutha futhi ulandele yonke imithetho ebalulekile. Ngaphandle kwalokho, ungahle ubhekane nesibopho. Isibonelo., Ukube ubungegqoke isigqoko ngenkathi ushayela, ungahle futhi ubekwe icala.
Ummeli Ungasiza Kanjani?
Ummeli olungileyo wokulimala komuntu siqu noma ummeli ochwepheshe ezingozini zebhayisekili noma zezithuthuthu eDubai angakusiza ngecala lakho lengozi yebhayisekili noma yezithuthuthu ngoba bayazi ngomthetho futhi baphatha amacala amaningi anjalo. Ngaphandle kommeli omuhle obhekene nezingozi zebhayisekili noma zesithuthuthu eceleni kwakho, kuba nzima ukufuna isinxephezelo njengoba ungazi ukuthi uzoqhubeka kanjani naleli cala.
Ngeke zikwazi ukukuqondisa ngenqubo eyinkimbinkimbi kepha futhi iqinisekise ukuthi awuphethwe ngecala noma okungenani, unciphise amathuba. Ngaphezu kwalokho, ngokumisa enkantolo yezomthetho, ummeli onekhono angakuxoxela ngesikhathi somthetho noma uthole isinxephezelo esihle kakhulu.
ummeli wokulimala komuntu noma ummeli
Ummeli okhethekile wokulimala komuntu siqu noma ummeli ochwepheshe bezingozi zebhayisekili noma zezithuthuthu eDubai